Ikuku Ikuku India: Enweghị obi ụtọ na-agwụ?
Location: Mbido » Ịdee » Tourism » Ikuku Ikuku India: Enweghị obi ụtọ na-agwụ?
The ahụhụ nke na-arịa ọrịa Air India ụgbọ elu adịghị ka ọ nwere njedebe ọhụụ n'oge na-adịghị anya.
Magbọ elu ụgbọ elu Maharaja na-efu, bụ oge mpako nke India na ihe ngosi maka ụlọ ọrụ ụgbọelu ụwa, taa na-enwe nsogbu ịchọta onye na-azụ ahịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ ga-eche ihu mbibi n'ihi ịba ụba na afọ.
Mgbatị a na-enyekarị maka usoro mgbamume zuru ezu na-egosi na ihe adịchaghị mma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara oge iri na abụọ, ụbọchị na usoro maka ịrịọ ka agbanweela, ihe ngosi na-egosi na ọnwa Ọktọba 31. 2020 dị ugbu a nwere ike gbasaa ọzọ na Disemba 31, 2020.
na '' Akụkọ Nyocha Audit Independent dị ka a hụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke Air India, maka afọ 2018-2019: “Companylọ ọrụ ahụ emebiela ego ruru Rs. Nde nde 84,748.0 n’ime afọ ahụ kwụsịrị na Machị 31, 2019 na, rue ụbọchị ahụ, ụgwọ ụlọ ọrụ ugbu a karịrị akụ ya ugbu a site na Rs. 6,52,458.7 Nde ma ọ gbakọtara ọnwụ nke Rs. 6,26,936.3 Nde nke butere mbuze nke uru nke ulo oru.
“N'agbanyeghị ihe omume ndị a ma ọ bụ ọnọdụ nke nwere ike itinye obi abụọ na ikike nke ụlọ ọrụ iji nọgide na-enwe dị ka a na-aga nchegbu, njikwa bụ nke uche na-aga nchegbu ndabere nke aza ajụjụ kwesịrị ekwesị n'ihi na nke nọgidere na-akwado nke Government nke India… ”
Usoro ọnụ ahịa na-agbanwekwa obere n'ihi ọrịa ọrịa COVID-19 nke mere ka nnukwu ụgbọ mmiri na-abaghị uru na-enweghị ego na-eweta ọnwa.
Usoro na ọnọdụ nke ire ere, ma ọ bụ disinvestment, bụkwa okwu na-atọ ụtọ nke gụnyere onye - na onye ekwesighi - ekwe ka ịrịọ maka akụ ahụ. Ihe ndi ozo gunyere abughi nani ugbo elu ma uzo na ala na ulo, tinyere ihe ndi ozo.
Otu “ihe ọzọ” dị ka ọmụmaatụ bụ na Air India nwere nnukwu ọrụ nka, nke ndị kachasị ụgbọ elu zụtara kemgbe ọtụtụ iri afọ. Ebumnuche kpatara ịzụta ndị a bụ na ha chọsiri ike ịhụ na Air India nọgidere bụrụ ụgbọ elu na-asọpụrụ ma na-asọpụrụ na ọnọdụ ụwa.
Air India Company Covid-19 Oria ojoo COVID-19 Government India
Hong Kong na-ekwuwapụta atụmatụ koodu ahụike maka njem njem gafere ókèala
Nhọrọ Ntuli Aka nke Skål na Nsonaazụ 2020 Nsonaazụ